Zvidzidzo zveChirungu kuMontreal | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
General English CoursesTsvaga chirongwa chinokodzera zvaunoda
Zvirongwa zveChirungu ChizhinjiTsananguro yekirasi
Iyi kosi inoita basa rechirungu / chiFrench mabasa uye yakarongedzwa zvakatenderedza misoro yakagadzirirwa kuvandudza hunyanzvi hwemazuva ese hwekutaurirana. Vavariro iri mukirasi iyi kukudziridza kutapira. Iko kune tarisiro yekutaura uye kudyidzana pakati pevadzidzi kuitira kuti vashandise izvo zvavanenge vadzidza mumakirasi avo apfuura. Kirasi iyi inofambidzana uye inokurudzira timu uye yeboka kuti vaone kuzadzisa chinangwa chekudyidzana senge mutauri wemunharaunda uye kupokana nevadzidzi kuburikidza nemabasa uye zviitiko zvinokonzerwa neprojekiti zvakaita semitambo-nhabvu, nhaurirano, hurukuro, kutaurira nyaya, mitambo yekutaurirana kana yemashoko uye mini mapurojekiti.
Iyi kirasi yakagadzirirwa kukubatsira kukurumidza kuita yako yekudzidza apo ichikubvumira iwe mukana wekusarudza makosi akaenderana nezvako chaizvo zvaunoda uye zvaunoda. Nguva yega yega isu tinopa yakasarudzika yechirungu / French chiitiko chakasarudzika chine dingindira kana remberi, seChirungu / chiFrench mumafirimu uye mimhanzi. Nekuti pane vanowanzove vashoma vadzidzi mukirasi ino, pane kutarisisa kwakatemwa kubva kumudzidzisi.